Deg Deg:Xiisaad Ka Dhex taagan Ciidanka isaaq ee Tukaraq ku sugan. – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Xiisaad Ka Dhex taagan Ciidanka isaaq ee Tukaraq ku sugan.
Waxaa xiisad xoogan ka dhex taagan tahay maleeshiyaadka Beesha isaaq ee ku sugan Deegaanada Sool iyo sanaag kuwaaso qarka usaaran in Xabad ka dhex qaraxdo.
Xiisadan ayaa taagneed 2 bilood ee ugu danbeeyay waxaana arrinkan uu salka ku haya tuhun iyo shaki soo kala dhex galay maamulka SNM i iyo maleeshiyaadkaasi taaso keentay in la xidho xubno badan oo kamid ah saraakiisha maleeshiyaadka Somaliland.
Maamulka somaliland ayaa helay xog ah in saraakiisha Jiida tukaraq iyo Sanaag ay xidhiidh la sameeyen dawlada Fadaraalka soomaaliya iyo maamulka puntland taaso markii ay soo baxday Hargaysa laga diray xubno wasiiro iyo taliyaha ugu sareeya maleeshiyaadka somaliland Nuux taani kuwaaso markii ay la kulmen Ciidanka ku sugan Tukaraq iyo Sanaag kala kulmay amar diido iyo ku doodin in loo kordhiyo mushahaarka.
Mudo kadib markii ay xalin waayen xaalada Jiida ka taagan xubnaha Hargaysa laga diray waxay garba duuben oo xabsiga dhigeen Taliye Doolaal oo beesha Habar jeclo ka soo jeeda ahaana sarkaal-kii abaabulay qorshahan kacdoonka kaaso hada loo dhaadhiciyay xabsig weyn ee Hargaysa,
Maleeshiyaadka Tukaraq iyo Sanaag ku sugan ee Habar jeclo ayaa iyana ku Hanjabaya inay ka soo baxaya Furimaha hadii aan shuruud la aan lagu soo dayn Taliye Doolaal.
xaalad kacasanaan ah ayaa ka dhex taagan maamulka Gooni goosadka ah ee SNM iyo maleeshiyaadka Beesha isaaq.
Previous Post: Daawo:-Nin Cadaan Ah oo somaliya Ka Duubay Filim Foolxun
Next Post: Doorka Kala Guurka Soomaaliya iyo degaanada SSC
Nin iyo hadalkii is leh, qofka xun inta aadan xumaantiisa sheegin buu isagu isa sheegaa, qofka waxaan soo qorayaa, waa dadkii dhillooyinka dhaleen ee dhallinta kacaanka, isaga iyo aabihii, qof nasab ah oo dhalad ah, ummad dhan ma wada caayi karo.
Idoor marduuf qaada helay waa majnuun falane
Reer khatumo waxaan leeyahy idoorka mid mid haloo toogto ileyn caqli majiro
Maamul goboleed gobolada waqooyi weeyaana khaniislans awalba wacalo bay ahaayeen